Iyo yakanakisa software uye epamhepo maturusi emakambani ekufambisa uye ekushanya muna 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Iyo yakanakisa software uye epamhepo maturusi emakambani ekufambisa uye ekushanya muna 2021
Kuputsa Nhau dzeEurope • Germany Kuputsa Nhau • Guestpost • Hospitality Industry • nhau • Technology • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Akasiyana Nhau
18 min kuverenga
Yakanakisa online online booking system
Munyika yanhasi yepamusoro-soro, yechitatu-bato software uye maturusi zvakabatsira mabhizinesi mazhinji kukwirisa kushambadzira kwavo uye rutsigiro rwevatengi vasingade kukwereta vanhu vazhinji.
Nekuda kwekushandurwa kwedhijitari, zviridzwa zvakadaro zvinowana kushandiswa kwakakura muindasitiri yekufambisa neyekushanya futi.
Regiondo inoti yakagadzira yakanakisa online kubhuka sisitimu uye yakapa sumo kuRegidodo Bookying Systems yezendo nemabasa.
Takabvunza boka revashanyi vanoshandisa nezve zvishandiso zvepamhepo zvavasingakwanise kurarama vasina.
Regondo ari kugovera zvavakawana kubatsira mabhizinesi kuti ashande zvakaringana uye ave akabatana zvirinani.
Maitiro ekubhuka anopa software mhinduro iyo inobvumidza vangangoita vatengi kuita online kubhuka kuburikidza newebsite yako uye zvimwe zviteshi. Asi ndeapi akanakisa pamusika?
Heino mharidzo yeRegionaldo:
Tinogona kuve takasarura zvishoma, asi isu tinoda zvigadzirwa zvedu uye tinoshanda nesimba kuona kuti tinokwanisa kuendesa yakanakisa booking mhinduro pamusika.
Takatanga rwendo rweRegiondo muna 2011 muMunich, Germany, uye tashanda pamwe neanopfuura zviuru zvisere zvekushanya uye vanopa zviitiko pasi rese kubva ipapo.
Vatengi vako nevashandi vachatida dhizaini yeCommondo. Zviri nyore kufamba kuti ukwanise kusvetukira mukati usina chero dzidziso.
Hazvina mhosva kuti iwe unotengesa matikiti makumi mashanu kana mazana mashanu pagore, Regiondo yakavakirwa kuita kuti hupenyu hwako huve nyore. Unyanzvi hwedu uye epamberi maficha akakwana kubata makuru mavhoriyamu.
Iyo Regiondo software inoteedzera yako ese mabhuku. Zvepamhepo, zvepamhepo, uye zvevatengesi zvinotorwa zviri nyore, kuchengetwa, uye kuongororwa.
Nei uchisarudza Regiondo?
Zvese kubhuka mune imwechete system kukubatsira ku:
• Wedzera Kutengesa • Sevha Zviwanikwa • Manage Mashandiro
✓ Rarama chaiyo-nguva yekuverenga manejimendi
✓ Yakavimbika uye yepakati zviwanikwa manejimendi
✓ Isu tinokubatsira iwe kukura nekukurumidza pasina mari yekudyara
✓ Isu tiri epuratifomu yakanakisa yemavhoriyamu akakurisa emabhuku
✓ Tine intuitive mushandisi interface.
✓ Tinokupa iwe izere kutonga pamusoro pechitarisiko uye nekunzwa kwechitoro chako chepamhepo chitoro.
✓ Inboarding uye rutsigiro timu iro rakagara rakagadzirira kubatsira.
✓ Yedu software inogadzirirwa shanduko
✓ Unganidza kune makuru maOTA mune kamwe chete
Unoda kuona Regiondo ichiita? Zadza fomu redu kukumbira yako yemahara demo uye chigadzirwa kushanya!
FareHarbor inogadzira zvishandiso zvine simba zvinobatsira kushanya uye vanoita zviitiko vanomhanyisa bhizinesi ravo nyore uye nemazvo. Ivo vanopa online kubhuka software uye zviwanikwa zvekushanya uye zviitiko zvemakambani.
Neboka revanoziva-vanoda, nhengo dzakasiyana-siyana kubva kupasirese, Fareharbor inovimbisa kukubatsira iwe kukura.
Nei uchisarudza FareHarbor?
✓ Enterprise-chikamu, mushandisi-inoshamwaridzika yakagadziriswa backend software
✓ 24/7 tsigiro pamwe neako-ne-wega kudzidziswa wega.
✓ Tichachinjisa rako ramangwana rekubhuka uye kugadzirisa webhusaiti yako.
✓ Wedzera kusvika kwako neyakagadziriswa nzira dzekuparadzira
✓ Isu tiri kambani inokurumidza kukura mune inoitika uye indasitiri yekushanya
Kuti uwane demo mhenyu uye uone kuti FareHarbor ingakushandira sei, zvakapusa zadza fomu pawebsite yavo.
Bokun ikambani yeTripAdvisor inopa Injini Yekubhuka Pamhepo, Channel Management, Inventory & Resource Management, B2B Musika, Kushuma, uye Mawebhusaiti yebhizimusi rekushanya uye rekuita.
Nei uchisarudza Bókun?
Isu tinokubatsira iwe kutanga uye kukura ako ekushanya & zviitiko zvebhizinesi.
✓ Tora mamwe mabhuku: tengesa pazviteshi zvakawanda sezvaunoda, uchisvika kune vatengi pasi rose
✓ Chengetedza nguva: wedzera kugona kwako uye gadzirisa yako bhizinesi mashandiro ese munzvimbo imwechete
✓ Kudza bhizinesi rako: tsvaga mikana yekuti iwe ukure kugovera kwako, wedzera kugadzirwa kwako, uye uvake migero mitsva yemari yebhizinesi rako
Kana iwe uchida kutanga kushandisa Bókun iwe unongoda ku kusaina kwavo kwemahara muedzo.
Checkfront ndeye gore-based bhizinesi manejimendi software yakagadzirirwa vashanyi vafambi, makambani ekurenda, uye vanopa pekugara.
Nei uchisarudza Checkfront?
✓ Usambofa wakarasikirwa nekumwe kubhuka: tora kubhuka pane webhusaiti yako chero nguva, chero kupi nekuteerera live live khalendari
Taura zvakanaka kumaspredishiti: chengetedza kubhucha kwako, gadzirisa kushomeka uye kuwanikwa, uye uwane chaiyo-nguva nzwisiso mubhizinesi rako zvese kuburikidza nepakati dashibhodhi
✓ Cheka basa rako muhafu: gadzirisa yako inodzokorora mabasa
Chekutanga chinopa mazuva makumi maviri nemaviri emahara kuyedzwa saka kana iwe uchifarira kuwana mukana kune avo maficha uye rutsigiro, ingori denga account. Kwete kiredhiti kadhi inoda.
Redzy ndeye yakazvimiririra yekubhuka software uye yekuparadzira chikuva, yakagadzirirwa yeVashanyi & Yekuita Vashandisi.
Nei uchisarudza Redzy?
✓ Shandura mashandiro ebhizinesi
✓ Nharembozha uye yakawanda-skrini kudzora
✓ Imwe-tinya webhusaiti kugadzira
✓ Yepamberi bhizinesi kuburitsa
✓ Guest kuratidza kusikwa
✓ Kupindirana kwakawanda: (Zapier, TripAdvisor Ongorora Express, Facebook Shop & nezvimwe).
✓ Yechokwadi-nguva mareti uye manejimendi manejimendi
Kutanga shanduko yako neRedzy unogona kunyoresa yavo free trial. Kwete kiredhiti kadhi inoda.
Trekksoft ndiyo inotungamira yekubhuka mhinduro yeZuva Rino Makambani.
Nei uchisarudza Trekksoft?
✓ Tengesa zvimwe nzendo nekubatanidza yako kumberi-kumagumo uye kumashure-kumagumo kutengesa
✓ Chengetedza mashandiro nekugadzira otomatiki uye emawoko mabasa
✓ Kudza bhizinesi rako nekubatana nevatengi kutenderera pasirese
Kuti ubvunze demo neboka ravo rekuvandudza bhizinesi, iwe unongoda ronga demo kufona.
Zvekushandisa Management Systems
Zvishandiso zveCMS zvinopa mhinduro isingadhuri uye yakachengeteka yevaridzi vanoda kutora kutonga pawebhusaiti yavo uye nekugadzirisa zvese zvirimo mumba. Ngatitsvagei kuti ndeapi makuru matatu CMS sarudzo dzevashanyi vashanyi.
WordPress ndiyo yepasirese inozivikanwa kwazvo Yemahara yemahara uye yakavhurika-sosi yezvinyorwa manejimendi sisitimu. Iyo inoshandisa-inoshamwaridzika, inogadziriswa zvachose, uye iri nyore kwazvo kudzidza. Ne WordPress, unogona kuvaka webhusaiti, kutanga blog, uye kunyange kutengesa online.
Nei uchisarudza WordPress?
✓ WordPress is vakasununguka, iwe unongoda kubhadhara kuitisa
✓ Zviri nyore kushandisa uye kudzidza; hapana ruzivo rwekodhi runodiwa
✓ WordPress inokupa kutonga kuzere kwewebhusaiti yako; inonyanya kugadziriswa, uye iwe unodzora zvakakwana pane yako saiti uye yako yese data
✓ Kugona kwaro kublogi kwakavakirwa-mukati uye kuri nyore kusanganisa
✓ Iwe unogona kuwedzera nyore kushanda kwewebsite yako nemapulagi
✓ Zviuru zvemitengo inodhura (mimwe yacho yemahara) misoro inogadziriswa inowanikwa online
Websites WordPress mawebhusaiti ari SEO ine hushamwari uye inopindura
✓ Iwe unokwanisa kuwana nharembozha maapplication ekugadzirisa yako saiti pane iyo kuenda
✓ Iyo sisitimu inopa ine simba midhiya manejimendi
✓ Kuita kwepamusoro uye chengetedzo
Kutanga yako webhusaiti kana blog, gadzira iyo WordPress.com account!
Squarespace ndeye yese-mu-imwe zvemukati manejimendi sisitimu inopa webhusaiti kuvaka, kubata, uye E-commerce mhinduro.
Nei uchisarudza squarespace?
✓ Ndiyo imwe yeakareruka mawebhusaiti vavaki ekushandisa
✓ Matemplate epamusoro-ewebhu webhusaiti anowanikwa kune akasiyana marudzi emawebhusaiti pakati payo mapotifoliyo, mablog, mapeji ekumhara, uye zvitoro zvepamhepo.
✓ Yakavakirwa-mukati SEO
✓ Nyore mushandisi interface
✓ YEMAHARA SSL certificate
✓ Kugamuchira dhizaini yekuona nhare
✓ 24 / 7 Customer Support
✓ Yakabatanidzwa E-Commerce
To tanga ne squarespace, unofanirwa kutora template inokodzera bhizinesi rako uye wozogadzira account. Squarespace ZVISINA Iva nehurongwa hwepachena saka kana webhusaiti yako yagadzirira kuvhura iwe unofanirwa kusarudza chirongwa uye kunyorera.
Webflow mhinduro yakasanganiswa pakati pechinyakare maturusi ekuvaka maturusi seSquarespace, echinyakare zvemukati manejimendi manejimendi senge WordPress, uye mawebhusaiti akaomarara (kana asiri mawebhusaiti eCMS).
Nei uchisarudza Webflow?
✓ Zvese mune imwe chikuva inosanganisa CMS, zvishandiso zvekushambadzira, mabhakiti, nezvimwe
✓ Webflow inokupa iwe rusununguko rwekugadzira zvakakwana zvakagadziriswa mawebhusaiti: gadzirisa zvese kubva pakutevera kusvika kumutsara-kureba uye kugadzirisa zvese zviitiko zvevara mumasekondi
✓ A inoonekwa kesevhasi iyo haidi chero coding
✓ Dhonza uye udonhedze peji rekuvaka mashandiro
✓ Iwe unogona nyore kugadzira mifananidzo uye kudyidzana
✓ Inopindura peji zvigadzirwa
✓ Webhupu mawebhusaiti ane SEO ane hushamwari
✓ Koka vapepeti uye vanobatsirana kuti vawedzere uye voongorora zvemukati pane webhusaiti yako
✓ Simba rekugadzirisa mhinduro
✓ Mahara kusvikira wagadzirira kutanga
Kuti uongorore chikuva, unongoda kusaina kweahara Webhuji account pamhepo.
Zvishandiso zvekutengesa zvinokubatsira kukwidzirisa maitiro ako uye kukura mari uchichengeta rese data revatengi rakachengetedzwa uye rakarongeka. Ramba uchiverenga kuti uone izvo zvinoshandiswa nevashanyi uye vanopa zviitiko.
Apollo idhata-yekutanga kubatanidzwa chikuva iyo inokubatsira iwe kuitisa, kuongorora, uye kugadzirisa yako kukura nzira.
Nei uchisarudza Apollo?
✓ Apollo inobatsira iwe kurova yako nhamba
✓ Tsvaga yako yakanaka tarisiro uye zvitsva zvinotungamira
✓ Mhanya email & kufona mishandirapamwe
✓ Gadzira misangano
✓ Ongorora & tweak maitiro ako
✓ YEMAHARA kuronga uye software demo inowanikwa
Wakagadzirira kuyedza Apollo? Pinda email yako yebasa uye tanga FREE. Iwe unogona zvakare tora DEMO kuona kuti Apollo ari kubatsira sei makambani kuvaka nzira inodzokororwa yekumisa misangano, kuvhara mari, uye kuongorora nzira dzekutengesa nekushambadzira.
Qwilr ndeyemazuva ano webhu zvinyorwa zvinyorwa zvine akasiyana masanganiswa uye matemplate. Iwe unogona kugadzira zvinofambidzana zvinobatsira kuvhara mamwe madhiri.
Nei uchisarudza Qwilr?
✓ Gadzira zvirevo zvetsika kamwe chete pasina kusiya CRM yako
✓ Dhonza mitengo yemitengo zvakananga kubva kuCRM yako
✓ Qwilr inopa akasiyana siyana maitiro akambogadzirwa uye raibhurari yezvinhu zvinoshandiswazve kugadzira zvirevo zvakasarudzika zvinoenderana nemazita ako echiratidzo
✓ Iwe unogona kugadzira inowirirana vhidhiyo kukwazisa, kosi zvidzidzo, kana chigadzirwa mademo
✓ Iwe unogona kubatsira vatengi neinopindirana ROI karukureta uye zvakajairika makotesheni
✓ Yakadzama peji analytics inowanikwa
✓ Iwe unogona kuwedzera e-chiratidzo mvumo
W Qwilr inokubatsira automate invoice uye inogona kuve yakabatana kune akasiyana siyana ekubhadhara masisitimu
Unogona kuedza Qwilr ye FREE kana kukumbira demo remahara pawebhusaiti yavo - chete saina account yeQwilr.
Zvekushandisa zvekushambadzira zvishandiso zvinokubatsira kuti ushande zvakaringana nekuchengetedza iwe nguva uye nekuronga mishandirapamwe yako pamberi. Ngatitarisei kuti ndeapi anoshanda zvakanyanya kumakambani ekufambisa uye ekushanya.
Mailchimp inozivikanwa kushambadzira otomatiki chikuva chinopa kushambadzira kweemail, chivakwa chewebhusaiti, uye dhijitari kushambadzira masevhisi. Iyo inokutendera iwe kuunza vateereri vako data, kushambadzira chiteshi, uye mazano pamwe chete.
Nei uchisarudza Mailchimp?
✓ Vaka maemail, kushambadzira munharaunda, mapeji ekumhara, maposadhi, uye nezvimwe kubva kunzvimbo imwechete
✓ Nyore-kushandisa-dhizaini maturusi uye anoshanduka matemplate emaemail ako, mapeji ekumhara, uye mafomu
✓ AI-inofambiswa yekugadzira mubatsiri kuti igadzire tsika dhizaini
✓ Chengeta yako yese data uye nzwisiso munzvimbo imwechete
/ 24/7 tsigiro rutsigiro-kuhwina
✓ 250+ kusanganiswa kweapps kubatanidza maturusi ako ese kuMailchimp
✓ Dhairekitori rezvinhu zvakavimbika
Unogona tanga neMailChimp pawebhusaiti yavo uyezve vobva vatora nharembozha yavo yeApple kana iOS. Kune chirongwa chemahara futi - unogona kutumira kusvika zviuru gumi emaimeri pamwedzi uye zviuru zviviri pazuva zvemahara.
Uchapupu chishandiso chakanakira kuvaka ruvimbo muchiratidzo chako. Iyo inogadzira popup pane yako webhusaiti inoratidza iyo mhenyu feed kana huwandu hwakazara hwevanhu chaivo vachangobva kutora danho kana kushanyira yako saiti. Nekuwedzera iyo kune yako yekushambadzira fanera iwe unogona kushandura inosvika mazana matatu muzana vashanyi mumitungamiriri, mademo, uye kutengesa.
Shandisa Uchapupu ku:
Gadzira kushomeka neRarama Vashanyi Kuverenga
Vaka kuvimbika neHot Streaks
Wedzera chivimbo neRazvino Chiitiko
Nei uchisarudza Uchapupu?
✓ Zviri nyore kuisa
✓ Zvimiro zvetsika
✓ Akanaka analytics
✓ Zapier Kubatanidzwa
✓ Freaky inomhanya mutoro kumhanya
✓ A / B yokuedzwa
Ivo parizvino vanopa 1 mwedzi FREE - iwe unongoda kuisa Proof kushambadzira pixel pawebhusaiti yako (heino maitiro) uye woona kana zvichikuwanzira kutengesa.
Buffer ndeyemagariro midhiya kuronga chishandiso chinoshandiswa neanopfuura 75,000 mabhizinesi pasi rese. Pamusoro pekubatanidza mishandirapamwe yako, unogona kushandisa Buffer kuyera uye kurondedzera nezvekuita kwayo uye kusvika.
Nei sarudza Buffer?
✓ Ronga uye rongedza yako Instagram Nyaya pawebhu kana nhare
✓ Unganidza yako "link in bio" kune akawanda ma URL anotariswa pane peji rinotengeka
✓ Sanganisira yekutanga kutaura paunoronga Instagram zvinyorwa
✓ Gadzira, chengetedza & ronga ma hashtag ekushandisa mune ako Instagram zvinyorwa
✓ Wedzera nzvimbo yako uye ma tag emushandisi sezvaunoronga zvinyorwa pa Instagram
✓ Enzanisa mashandiro enyaya, zvinyorwa zvega, uye ma hashtag
✓ Vaka zvimiro zvetsika uye ugovane zviri nyore nechikwata chako
✓ Nakidzwa ne FREE urongwa
Tora mhinduro kumibvunzo yakajairika nezve yako yemagariro midhiya zano
Kana iwe uchida kutsvaga yakakura Buffer maficha ingo sarudza chirongwa chinokodzera zvaunoda uye tanga muedzo wako wepachena.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki tarisiro yedu inowira pamashandisirwo eprojeki manejimendi. Kuva nekutonga pane ese maitiro uye mafashama ekushanda kwakakosha kune vafambi uye vezviitiko vanopa. Uye maturu manejimendi manejimendi ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekuona kuti maitiro ese anoteedzerwa zvakanyanyisa. Pamusoro pezvo, ivo vakanaka kuchengetedza timu yakarongeka vachiwedzera kugona kwavo.
Tsvaga zvimwe pamusoro penzvimbo yekufarira yemukati manejimendi manejimendi manejimendi evashanyi uye evanopa zviitiko.
Asana ndeyewebhu inogadziriswa uye nharembozha yakagadzirirwa kubatsira zvikwata kuronga, kuteedzera, uye kubata basa ravo.
Izvo zvinokutendera iwe kupaza ako mapurojekiti uye anodzokororwa mashandiro mumabasa anogadzirika, rimwe nerimwe riine zuva raro rakakodzera, mashoma, vanopihwa, uye zvimwe hunhu.
Nayo Kanban mabhodhi, Asana ikozvino yakatonyanya kuchinjika kuti iwe ugone kuronga yako mafambiro ekufamba munzira ine musoro kune rako bhizinesi. Tarisa uone muvhidhiyo pazasi:
Nei uchisarudza Asana?
✓ Rongedza basa rako muzvirongwa zvakagovaniswa semazita kana mabhodhi eKanban
✓ Fungidzira zvakakosha nzvimbo dzekutarisa muchirongwa chako kuyera uye kugovana kufambira mberi
✓ Ipa mabasa muridzi akajeka, kuti munhu wese azive kuti ndiani ane mhosva
✓ Paza mabasa mu Subtasks uye Zvikamu
✓ Gadzirisa mapurojekiti neCustom minda
✓ Kurukura mukati memabasa
✓ Tumira zvinyorwa zve projekiti
✓ Sync Asana nemamwe mapuratifomu.
Iwe unogona kusaina kuAsana.com uye shandisa chishandiso mahara kusvika anosvika gumi nemashanu ematimu enhengo. Zvimwe zvemberi maficha zvakavharwa asi iwe unenge uine zvese zvaunoda kuti utange pane yemahara chirongwa. Iko kune zvakare vhezheni yeshanduro inowanikwa yeApple neIOS yekuchengetedza zvinhu pazviri kufamba.
Zvakafanana naAsana, Trello ipuratifomu ye timu manejimendi manejimendi. Nekudaro, iyo huru yekutarisa iri pane kanban mabhodhi uye nyore kushandisa.
Nei uchisarudza Trello?
✓ Nyore yekuona interface uye intuitive yekudhonza-uye-kudonha mashandiro
✓ Simba rekubatanidza kugona - kusanganisa maturusi epamusoro ebasa
✓ Kwete-kodhi otomatiki
✓ Fambisa kutaurirana kuri nyore pakati pezvikwata
✓ Makadhi ane ruzivo rwese rwaunoda
Izvi ndizvo zvatinoshandisa kuRegiondo kuchengetedza basa redu kukambani yese. Tiine vashandi vanopfuura makumi mashanu, isu tinoshandisa Trello kuwiriranisa mapurojekiti pamadhipatimendi akasiyana kuti tikwanise kuvaka nekuendesa yedu online online booking system.
Kutanga kushandira pamwe uye kugadzirisa ako mapurojekiti naTrello, zvakapusa kusaina neemail yako pawebsite yavo.
Monday.com ndeimwe inogadziriswa webhu uye nharembozha manejimendi manejimendi uye yakakurumbira imwe nzira kuna Asana. Inoshandiswa neAdobe, Wix, Universal, Walmart, uye mamwe akawanda marangi epasirese.
Sei uchisarudza Muvhuro?
✓ Nyore kushandisa - kumisikidza purojekiti mabhodhi nekukurumidza
✓ Inobatsira uye yakapusa kutevedzera tutorials inowanikwa mune yeruzivo base
✓ Yevanhu uye yeruzhinji maBhodi
✓ Kukurukurirana zvinobudirira uye zviziviso zvekuita basa (tag vanhu uye gamuchira notices kana wamakwa)
✓ Iwe unogona kusiya mhenyu kutaura pane zvinoonekwa
✓ Iwe unogona kuteedzera uye kunama kubva kuAdobe
✓ Wepamusoro Rate Ongororo uye Kushuma
✓ Tsigiro iripo kune vese vanyoreri uye kwete chete vatengi veprimiyamu
Kana iwe uchifarira Muvhuro, chete tevera chinongedzo kutanga mumatanho mashoma mashoma
Iwo maturusi esoftware akagadzirirwa uye anoshandiswa neindasitiri yekufambisa anozivikanwa kwazvo nechikonzero. Ivo vanobatsira zviuru zvemabhizinesi kuita pamusoro uye kupfuura zvavanotarisira zuva rega rega.
Isu tinovimba sarudzo yedu inokubatsira iwe kuwana chaicho chako chekushanya kana kambani yebasa uye pakupedzisira unatsiridze kudyidzana kwevatengi nekuita kwemukati.
Dzimwe ndege kuLondon, Kyiv neIstanbul paMhepo ...
Malta Tourism Kuita Kufamba Kunyore kune Vashanyi kubva ...
Vols kubva Bangkok kuenda kuSamui, Chiang Mai, Phuket ...
COVID-19 imbwa dzinofembedza dzinouya kuMiami Airport
Vatorwa vakapambwa nevarume vepfuti kubva kuMexico hotera ...
Masekasi muNorth Ireland anopera maclown
WestJet ikozvino inoda yakazara yakazara COVID-19 yekudzivirira yevose ...
Southwest Airlines haizopisa vashandi vayo ...
Ndege Diki Dzinorovera Mudzimba dzevavakidzani: 2 ...
Hurumende Yese Iri: Revival uye Reforms muIndia ...
Shanyira Britain IZVOZVI kana Wakavharirwa! ETOA CEO Tom ...
Lithuania neKazakhstan kuvhura yakananga mufambi ...
Hon. Edmund Bartlett Ari Kuita Mashiripiti eJamaican ...
Chitima chitsva chemutengo wakaderera kubva kuLondon kuenda kuElinburgh
Kugadzirira Njodzi Dzinongoitika Dzoga: Iyo Pamberi uye Iyo ...
Shamwari Shamwari nehama Vachafambisa Kufamba ...
Expedia Inoona Inoshamisa Kukura kweJamaica
Passenger Traffic kuMain Airports muIreland Up 230%
Turkey haizomisikidza zvirambidzo kune vashanyi veRussia